All inaad u baahan tahay inaad ogaatid oo ku saabsan 8tracks Radio
Isticmaalka Internet radio ayaa sii kordhaya, sababtoo ah barnaamijyadooda radio ka soo baxay maanta oo kale barnaamijyadooda sida Spotify iyo Pandora. Sababta sababta adeegyada raadiyaha kuwaas oo waxa ay noqonayaan iyo aad u badan oo caan ah, sababtoo ah waa dad badan oo jecel muusiga iyo dhagaysiga muusigga siinayaa saameyn weyn ee noloshooda.
Khasaare ugu weyn ee ugu adeegyadan waa in playlists ay ka samaysan yihiin isku geynta by ah, halkii ay ka users dhabta ah. Ma jeclaan lahayd fiican ma noqon haddaad maqasho in playlists loo sameeyey dad run ahaantii jecel muusiga? Waa hagaag, nasiib wanaag radio 8tracks jiro. 8tracks waa radio internet ah oo ay dadku dhab ka qayb kala duwan ee dunida, ee da 'walba leh, la abuuro playlist oo qaybsada online dadka kale halkan ha. Si aad u badan oo ku saabsan sida 8tracks ogaado iyo sida ay u shaqayso, sii akhri.
Qaybta 1aad: Sida loo Saxiix / 8tracks Login
Qeybta 2: Sida loo Helo playlist On 8tracks Raaca DJ
Qeybta 3: Sida loo sameeyo playlist a On 8tracks
Qeybta 4: Apps 8tracks
Qeybta 5: 8tracks Iyo Spotify Isbarbar
Waxaad awoodaa inuu ciyaaro keegag in 8tracks xitaa oo aan xisaab, si kastaba ha ahaatee, waxaa jira faa'iido weyn u qabo xisaab adiga ku gaar ah halkan. Marka hore, waxaad gali kartaa keegag kuu gaar ah oo qaybsada dunida, waxa kale oo aad kala socon kartaa DJ ama kuwa kale ee isticmaala oo Uploads playlists iyaga u gaar ah, iyo ugu dambayntiina, waxaad kara kuwan raadkaygay aad jeceshahay u fududaato tixraacoodu marka aad rabto in aad mar kale ku ciyaaro. Sidaas halkan sida loo saxiixo ama gasho in aad xisaabta 8tracks.
Sida loo kala saxiixday Up
Haddii aadan weli ku leedahay xisaabta kuu gaar ah, guji Aayad waxay kor u button ee qaybta kore ee bogga, buuxi sanduuqa leh ilowdey doortay, email, iyo password ka dibna Mark hubi haddii aad ku raacsan tahay shuruudaha isticmaalka, iyo click ku biiro haatan. Waxaad heli doontaa email ah si loo xaqiijiyo diiwaan-aad. Waxa kale oo aad Shaqsi karaa iyadoo la isticmaalayo aad xisaabta Gmail ama Facebook; Ma ahan in aad u baahan tahay si ay u dhammaystiraan, wax.
Ka dib markii ay kor u saxiixay, waxaad buuxin kartaa adiga kuu gaar ah profile. Halkan waxa aad ka macluumaadkaaga shakhsiyeed sida Halkee ka timid, la wadaagi karaan oo ku sifayn of music aad ku raaxaysato ugu, iwm
Sida loo Soo gal
Haddii aad hore u leedahay xisaabta oo aad rabto inaad gasho, riix Log ee button, daaqad ka muuqan doona iyo ku weydiiyo inaad buuxisid oo aad username / email iyo password, samayno haddii aad saxiixdo via email. Ama haddii aad haddii aad isticmaali aad Gmail ama Facebook inuu saxiixo, markaas waa inaad iyaga oo sidoo kale haddii aad ku gashid, riix batoonka oo aad si toos ah doontaa in aad xisaabta.
Sida ugu dhakhsaha badan aad tagto 8tracks.com, waxaad arki doontaa playlists featured iyo ugu caansan on goobta. Laakiin si ay u awoodaan in ay soo koobto raadinta sida ay u gaar ah doorashadaada, isagoo xisaab waxay kuu sahlaysaa in aad ka raadin, oo halkan sida.
Habka 1: Tag Baadh
Marka aad gasho in aad xisaabta, riix batoonka Baadh soo socda si Home iyo Feed. Halkan waxa aad ku arki doonaan playlists ku qoran sida ay ku sifayn ay, caan, iyo waqtiga Upload.
Habka 2: Dooro playlist inay Play
In this page waxaad arki doontaa tags soo jeediyay kala duwan ee laga yaabo in la xiriira danahaaga. Just guji kasta oo iyaga ka mid ah si aad u hesho liiska playlist la tag in. Tusaale ahaan, guji "xagaaga 'tag, waxaad ka heli doontaa playlist la xidhiidha xagaaga. Laakiin haddii tag ee aad raadinayso ma aha in liiska, kaliya aad u qor karaa sanduuqa hoose. Aan niraahno, aad rabto in aad raadiso playlist in ka dhigi doonaa, waad qosli, ka dibna ku rid 'funny' oo aad la soo jeediyay doonaa playlists ka kooban heeso lagu qoslo.
Waxa kale oo aad kala shaandhayso kartaa raadinta, waxaad iyaga kala sooci karto by kuwaas oo ah trendiest, cusub, iyo ugu caansan laakiin gujinaya fallaadha hoos ku Filter ag taagnaayeen, oo doortaan wax ka fursadaha siiyo.
Marka playlist on 8tracks, waxaad u baahan tahay in ay ka shaqeeyaan in aad hal-abuurka, ka hor inta xataa inuu isku dhafka ah, waxaad u baahan tahay si ay u eegaan nooca playlist aad rabto in aad kaas oo category waxa ay ku dhici. Ma rabtaa in aad playlist in ay waxbarasho, xafladeyn, ama kaliya horjoogsado ka soo baxay? Tani ma aha qasab, laakiin waa aan ka fiican haddii ay noqon doontaa abaabulaan? Intaa waxaa dheer, in aad soo jiidan kara dadka isticmaala in ka badan in aad dhegaysato playlist.
Hana haddii aanad garanayn sida loo sameeyo playlist weli, halkan sida.
Talaabada 1: In la abuuro qas
Riix Abuur button Mix by dul on hoos u soo dhaadhacay arrow soo socda si aad avatar. Tani waxaa laga heli karaa qaybta sare ee bogga.
Talaabada 2: Tracks Upload
Halkan ayaa ah meesha aad geliyaan doonaa tareenka aad rabto in aad in aad playlist, ogow in aad leedahay uploaded in aad playlist ama ugu yaraan 8 kuwan raadkaygay heeso. Halkan waxa kale oo aad ka geli karaan horyaalka, tags, cover farshaxanka, oo wuxuu ku shubay sharaxaad aad rabto in aad ku riday aad isku dhafka ah.
Ka dib buuxinta horyaalka, sharaxaad, iyo tags, waxaad bilaabi kartaa uploading tareenka aad rabto in aad in aad playlist
Just riix badhanka ama jiita Upload ku raad jeedi music ka folder file (ama maktabadda haddii aad hore u sameeyey playlist ka hor).
Talaabada 3: naadiya playlist
Marka aad hore u samaysay uploading raadkaagu, waxa ay haatan u diyaar u yahay bandhiga! Koombiyuutarka qaadan kartaa dhowr daqiiqo ku shuban; waxaa had iyo jeer ku xiran tahay tirada file waxaa aad isku dayayaan in ay geliyaan iyo xawaaraha xiriir aad internet.
Waxaad dooran kartaa haddii aad rabto in aad playlist in la baahiyo si cad ama aad rabto inaad u qotomiyey sidii gaar ah ama kaliya kuwa URL ee track yihiin mid ka mid ah ka heli karaan iyo Dhagaysta. Haddii aad rabto in aad u qotomiyey sidii gaarka loo leeyahay, guji sanduuqa ku mid ka mid ah oo oranaya 'mix Tani waa la xiri doono.' Haddii kale, kaliya waxaa ka tago.
Waxa kale oo jira ogaysiis sheegaya in 'Tani waa isku darka NSFW.' Ma waxay ka dhigan tahay Safe Shaqada, taasoo muujinaysaa in playlist ee ku jira waxyaabaha dadka waaweyn. Riix sanduuqa haddii ay dhacdo in si loo qariyo playlist ka qaan gaarin.
Markii wax walba u muuqataa mid fiican oo sheegay in 'Your isku dhafka ah ayaa diyaar u ah si ay u daabacaan!', Riix badhanka naadiya oo aad samaysay.
Ayaad markaa marin u radio 8tracks meel kasta oo aad isticmaalayso barnaamijyadooda 8tracks free la heli karo qalabka waaweyn ee ugu. Waxaa jira malaayiin dad ah kuwaas oo horay u soo bixi oo lagu rakibay barnaamijyadooda ku saabsan qalabka ay, sidaas darteed waa in aad sidoo kale! Si aad u ogaato app waa la jaan qaada qalab aad, ka akhriso liiska hoos ku qoran.
Haddii aad tahay qof mashquul ah ama kaliya jecel dibadda wax badan in aad dhif in guriga, ilaa in la furo your computer, in aad mobile aad kala soo bixi kartaa Chine kuwaas.
8tracks ee macruufka
8tracks u Android
Waxaa sidoo kale jira barnaamijyadooda desktop in aad waayo-aragnimo radio 8tracks fudud oo macaan ka dhigi doonaa. Haddii aad guriga shaqada ama sida barashada muusiga, rakibidda app ah 8tracks in aad desktop fikrad fiican noqon doonaa.
8tracks Radio u Mac
8tracks loogu Madaxweyne Siilaanyo
Haddii aad socda blog ah, laga yaabo in aad rabto in aad ka fiirsan gelinaya music qurux badan waxa ku booqanaya si ay ugu raaxaystaan. Tani waxay ka dhigi doonaa kooxda martida ah si aad u sii dheer joogo on your site ama mar kale iyo mar kale soo booqdo. Sidaas waxaa laga yaabaa in aad rabto in aad ka fiirsan ku daray plugins si aad goobta haddii aad isticmaalayso WordPress ama Joomla.
Plugin 8tracks radio WordPress
Radio 8tracks Joomla module
8tracks iyo Spotify yihiin labada radio internet la yaab leh, waxay u oggolaan in dadku ay sii track ee ugu dambeeyey iyo gabayadii ugu caansan oo la ogaado kuwa cusub. Laakiin dabcan, waxay leeyihiin sifooyinka iyo khilaafaadka u gaar ah oo ay.
Spotify waa buugga music meesha aad dooran kartaa song kasta oo aad rabto in aad u dhagaystaan ​​ah. Iyadoo 8tracks dhinaca kale ma aan oggolaan inaad bedesho waxa aad dhagaysanayso, kaliya aad u dhagaystaan ​​waxa sort in playlist aad doorato in aad ka ciyaaro. 8tracks san yahay maalmo caajis kuwa aad u doonayaa inaan u saaraan sariirtaada maalintii oo dhan dhagaysiga muusigga, sababtoo ah waxaa si toos ah u doortaan playlist inuu ka ciyaaro iyadoo ku xiran tags aad doorato mar playlist hadda oo la ciyaaro gool.
Si aad labada is barbar, Spotify badan yahay bulshada ka badan 8tracks, la Spotify aad awoodo si aad u aragto waxa aad saaxiibo on Facebook hadda jira ama dhawaan ayaa la dhageystay, waxa kale oo aad iyaga la wadaagaan maktabadda song.
Iyadoo u 8tracks, waa sida dheeraad ah oo shakhsi ah. Waxaa farxad ah in aad heli doontaa marka aad dhagaysiga muusigga playlist in uu ka go'an in ay dhadhan shakhsi iyo niyadda halkii ay diiradda dhadhankii, sifayn, ama niyadda ka mid ah saaxiibada on Facebook.
Sida loo Download Free Music Album
Sida loo Download 8tracks Playlists
Halkee Dhegayso Music Videos Online on Shabakadaha
RIP Music ka iPhone on Mac
Sida loo Edit ID3 Tags toos ah, Beddelidda Tracks 'Information, labalaabka Track
Lugood Kulanka vs. Amazon Cloud Player
Sidee loo helaa Songs soo bixi Soundcloud
Adeegga Apple Music Streaming
Sida loo Dhegayso Music on Facebook
Top 10 Goobaha Laga Helo Music Facebook daboolida
Your AC3 Files Audio jabay OS x 10.8 Mountain Libaaxa? Xaliyay.
> Resource > Music > All aad u baahan tahay inaad ogaatid oo ku saabsan 8tracks Radio